Fanjavonan’ny Minisitry ny Atitany Ao Makedonia Mahagaga · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Septambra 2016 6:02 GMT
Araka ny Fifanarahana Pržino , izay namarana ny krizy politika sy ny krizin'ny rafi-panjakana tao Makedonia, tsy maintsy manendry minisitra vonjimaika ny Fiombonana Sosialy Demokraty ao Makedonia (SDSM) mba hahazoana antoka fa tsy azo hanaovana hosoka amin'ny fifidianana intsony ny minisiteran'ny atitany araka ny fitsipika anatin'ny Fikambanana Revolisionera Makedoniana – Antoko Demokraty Fampiraisampirenena Makedoniana (VMRO-DPMNE).
Nahavita nanendry sy nanala ny minisitra vaovao tao anatin'ny roa andro monja ny antokon'ny fitondràna VMRO-DPMNE, nandritra ny fotoana nivorian'ny mpitarika avy amin'ny antoko efatra lehibe indrindra sy ny fitokanana ny governemanta vonjimaika. Ary rehefa vita izany rehetra izany, dia tsy ampy indray andro ny niasan'i Andonov tao amin'ny birao.
“Miaraka amin'ny fanovana misy androany ao amin'ny Minisiteran'ny Atitany nataon'ny antoko eo amin'ny fitondrana, dia mikasa ny hametraka sy hanamafy orina ny toerany alohan'ny fifidianana ao anatin'ny minisitera izy ireo, ary mieritreritra ny hitazona izany hatrany. Ny Minisitry ny Atitany no andrim-panjakana manan-danja indrindra mandritra ny fifidianana ary maniry izany mba hijanona eo ambany fanaraha-mason'ny MVRO-VMRO ny governemanta. Fa ho an'i Oliver Spasovski, tadiavin-dry zareo hitovy amin'ny mpanjakavavin'i Angletera izy, na— ny marimarina kokoa—tsy tian'izy ireo hanana fahefana tena izy izy na dia mbola mipetraka teo amin'ny ambony indrindra aza, ” hoy ny loharanom-baovaon'ny sampam-baovao Meta.mk .
Niresaka ny andian-teny latinina fanta-daza “Veni, vidi, vici “ i Aleksandar Dojranliev.